BILASHADA RAMADAAN IYO BUSHIGA (JIRRADA) MUSLIMIINTA SHAQEEYSO MAXAA KULMIYA?? – War La Helaa Talo La Helaa
BILASHADA RAMADAAN IYO BUSHIGA (JIRRADA) MUSLIMIINTA SHAQEEYSO MAXAA KULMIYA??
By madoobe	 Last updated May 16, 2018
Maalinta ay bisha Ramadaan 1,da tahay ama maalinta ka horreysa, qofkii waco shaqadiisa ee ku yiraahda waan xanuunsanayaa oo ma shaqeyn karo, waxey u qaataan in ay tahay sababtu bishaan Ramadaan darteed. Waa wax dhici karo in xanuunka iyo bilashada bisha ay isku soo beegmaan, ma dhici karto laakiin in sanad walbo ay labadaas isku soo beegmaan. Ogoow hadde, ma ahan hal qof iyo hal goob-shaqo waxa arrinkaas ka dhax dhaco bil walbo oo Soonqaad. Rag iyo dumar badan ayaa sidaas caadeystay, waxeeyna arrintaan ka dhacdaa dalal badan oo Galbeedka ku yaallo oo waqtiga la soomanaanayo uu aad u dheer yahay.
Haddaba walaal, xusuusnow in mushaarka aad beenta ku kasbaneeyso uu yahay xoolo dadoow. Bisha aad suurad xumeeyneysana waa bil barakeysan. In aad xaq dadoow cunto iyo in aad bishii barakeysneyd ka dhigto bil been lagu qaraabto ALLAAH uguma dhawaaneysid, laakiin baddalkeeda waad caro galineysaa marka aad asiga dartiis xoolo dadow beenbeen ku kasbato, Islaamkana aad foolxumeyso.
Walaalayaal adinkoo soomaya shaqadiina taga, waqtiyada kasoo harana cibaadeysta. Haddii ay idinku adag tahayna fasax qaata, hadduu doono bilaa lacagna ha naqdee. Xasuusnaada waxa aad maanta bi’ineysaan waxeey u baasbaxeeysaa muslimiin badan oo barrito ay ku adkaan doonto in ay shaqo helaan. Bishan caalamkoo dhan laga qadariyana waxeey isku badali doontaa bil la karaahiyeesto.
Waa Kuwee Dalalka Maanta Laga Soomman Yahay Ee Ay Soomaalidu Ku Badan Yihiin?!!!